पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन : २०७५ साल कार्तिक २३ गते शुक्रबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल – Etajakhabar
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन : २०७५ साल कार्तिक २३ गते शुक्रबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । सच्चिदानन्दरुपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे । ताप त्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नुमः ।पञ्चाङ्ग श्रीसूर्य दक्षिणायन,शरदृतु,विरोधकृत् नाम संवत्सर,श्रीशाके १९४०,सम्वत २०७५ साल कार्तिक २३ गते शुक्रबार नेपाल सम्बत ११३९ कछलाथ्व,सन् २०१८ नोभेम्बर ९ तारिक शुक्लपक्ष द्वितीया तिथि राती ९ वजेर २० मिनेटसम्म,अनुराधा नक्षत्र राती ९ वजेर ३३ मिनेटसम्म,शोभयोग,बालवकरण,आनन्दादियोग राक्षस,सूर्य तुला राशीमा,चन्द्रमा वृश्चिक राशीमा ।
वारवेला,मुहूर्त र राशी ॐःराहुकालः–अशुभ विहान १०÷२६ वजेबाट ११÷४७वजेसम्म रहनेछ,अशुभ यमघण्टायोगः–अपरान्ह२÷३०वजेबाट ३÷५२ वजेसम्म रहनेछ । गुली कालः–सामान्य विहान ७÷४३ वजेबाट ९÷४ वजेसम्म रहनेछ । दूरमुहूर्तः–अशुभ विहान८÷३२ वजेबाट ९÷१५ वजेसम्म र मध्यान्ह १२÷९ वजेबाट १२÷५३ वजेसम्म रहनेछ । शुभ अभिजित मुहूर्तः–पूर्वान्ह ११÷२५ वजेबाट मध्यान्ह १२÷९ वजेसम्म रहनेछ ।
ॐःसूर्योदयबाट प्रातः ७÷४२ वजेसम्म चर वेला,७÷४२ वजेबाट ९÷४ वजेसम्म लाभवेला,९÷४ वजेबाट १०÷२५ वजेसम्म अमृतवेला,१०÷२५ वजेबाट ११÷४७ वजेसम्म कालवेला,११÷४७ वजेबाट १÷८ वजेसम्म शुभ वेला,१÷८वजेबाट २÷३० वजेसम्म रोगवेला,२÷३० वजेबाट ३÷५१ वजेसम्म उद्वेग वेला र ३÷५१ वजेबाट सूर्यास्तसम्म चरवेला रहनेछ ।
ॐःसूर्यास्तबाट ६÷५२ वजेसम्म रोगवेला,६÷५२वजेबाट ८÷३० वजेसम्म काल वेला,८÷३० वजेबाट १०÷९ वजेसम्म लाभ वेला,१०÷९ वजेबाट ११÷४७ वजेसम्म उद्वेग वेला,११÷४७ वजेबाट १÷२६ वजेसम्म शुभवेला,१÷२६ वजेबाट ३÷४ वजेसम्म अमृत वेला,३÷४ वजेबाट ४÷४३ वजेसम्म चर र ४÷४३ वजेबाट सूर्योदयसम्म रोगवेला रहनेछ ।
समय त्यति अनुकुल देखिन्न,नयाँ काममा हात नहाल्नु होला । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्छ खानपानमा ध्यान दिनु होला । अन्तिम चरणमा पुगेका काम पनि रोकिन सक्छन् । खवर राम्रो आउने छैन ।
दिन रमाईलो सँग व्यतित हुनेछ । आफ्नै पहलमा धेरै काम बन्ने छन् । नविन कार्यको बारेमा विचार विमर्श हुनेछ । यात्राको योग देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा सम्भावना राम्रै देखिन्छ । आम्दानी बढ्ला ।
आफन्त नै शत्रु हुन सक्छन् काम गर्दा होशियार रहनु होला । विना मेहनत फलको आश नगर्नु होला । परिश्रम अनुसारको फल पाईने छ । स्वास्थ्यमा थोरै ख्याल राख्नु पर्ने देखिन्छ । आय आर्जन बढ्नेछ ।
चिन्तन मनन धेरै हुनेछ भने काम थोरै हुनेछन् । कुनै कुरामा ढिलो गर्नु भयो भने त्यो ठाँउ अरुले लिनेछन् । आफ्नो कारण अरुले फाइदा लुट्न छन् । समस्या कम हुनेछन् । व्यापारमा सामान्य सुधार आउनेछ ।
लाभका काम भन्दा खर्चका काम धेरै हुनेछन् । कार्य शिथिलता बढ्नेछ । व्यापार व्यवसायमा मन्दि आउनेछ । पारिवारिक जमघट बढ्नेछ । सहयोग गर्ने भन्दा माग्ने बढि हुनेछन् । बस्तु खरीदको योग छ ।
सहास,धैर्यता र पराक्रम बढ्नेछ । आफ्नै पहलमा धेरै कामको छिनोफानो हुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ । आश्वासन दिने र लिने काम नगर्नु होला । आफन्तबाट सहयोग पाईनेछ ।
वोलिको प्रभाव थोरै पर्नेछ । महत्वकाँक्षी योजना अगाडि नबढाउनु होला । काम गर्दा आर्थिक कुरालाई ध्यान दिनु होला । अस्थिरता बढ्न सक्छ नियन्त्रण गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । प्रयत्नपूर्वक गरेका काम सफल हुनेछन् ।
अनावस्यक खर्चमा कमि आउनेछ । व्यापार व्यवसायमा सुधारका संकेत देखिने छन् । काम गर्ने जोश जागर बढ्नेछ । उत्तम भोजन र आसन प्राप्तिको योग देखिन्छ । ज्ञान र शिप विकास हुनेछ ।
समय प्रतिकुल देखिन्छ । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउनेछ । बन्न लागेका काम विग्रिन सक्छन् सर्तक रहनु होला । शारीरिक दुर्वलता बढ्नेछ । लेनदेन कारोवार विग्रिन सक्छ । अतिथि सत्कारमा खर्च हुनेछ ।
प्रयत्न गर्नु भयो भने पुरानो बक्यौता रकम उठ्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट आम्दानी बढ्नेछ । गरेका काम उदाहरणीय हुनेछन् । जीवन साथीको सहयोग लिएर काम गरेमा प्रभावकारीता बढ्नेछ ।
अधुरा काम आज बन्ने छन् । विरोधीहरु शरणमा आउने बातावरण बन्ला । गिरेको मनोबल उठ्नेछ । काम गर्ने जोश जागर विस्तारै बढ्नेछ । व्यापारमा व्यवसायबाट सामान्य लाभ होला । इज्जत प्रतिष्ठा बढ्नेछ ।
पढाई लेखाईमा थोरै ध्यान जानेछ । धार्मिक विश्वास बढ्नेछ । अनावस्यक विषय बस्तुमा टाउको नदुखाउनु होला । वोलीको प्रभावकारीता बढ्नेछ । व्यापार व्यवसाय मन्द गतिमा अगाडि बढ्नेछ । यात्रा हुनसक्छ ।
प्रकाशित मिति: बिहिबार, कार्तिक २२, २०७५ समय: २३:३०:५९
“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७५ साल चैत्र ३ गते आइतबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७५ साल चैत्र २ गते शनिबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“पशुपतिनाथले सबैको इच्छा आकांक्षा पुरा गरुन ! २०७५ साल चैत्र १ गते शुक्रबारको तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”
“मनकामना माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन ! २०७५ साल फाल्गुन ३० गते विहिबार आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल”